Abahlinzeki beSolar PV Isixhumi kanye neFektri - Abakhiqizi Bokuxhuma I-China Solar PV
ISolar Panel Isixhumi se-MC4 Nge-DC 1000V TUV Umsebenzi ovunyiwe wohlelo lwe-PV ukuxhuma iphaneli yelanga kanye nebhokisi lokuhlanganisa. Isixhumi se-MC4 sisebenzelana ne-Multic Contact, i-Amphenol H4 nabanye abahlinzeki be-MC4, kufanelekile izintambo ezihamba ngamandla elanga 2,5mm, 4mm no-6mm. Inzuzo ukuxhumana okusheshayo nokuthembekile, ukumelana ne-UV ne-IP67 manzi, kungasebenzela ngaphandle ama-25years.
I-Multi Contact 4 Solar Cable Isixhumi 1500V 50A isetshenziselwa ukuxhuma iphaneli yelanga ne-Inverter esiteshini samandla seSolar. Isixhumi se-MC4 sisebenzelana ne-Multic Contact, i-Amphenol H4and ezinye izinhlobo ze-MC4, futhi ilungele ikhebuli yelanga, 2.5mm, 4mm kanye no-6mm. I-Solar Isixhumi Senzuzo ukuxhumana okusheshayo nokuthembekile, ukumelana ne-UV nokuvimbela amanzi kwe-IP68 ngewaranti yempilo eyi-25years.
I-MC4 Solar Panel Isixhumi se-solar cable 10mm2
I-MC4 Solar Panel Isixhumi se-solar cable 10mm2 isetshenziswa ohlelweni lweSolar ukuxhuma iphaneli yelanga ne-Inverter. Isixhumi se-MC4 sisebenzelana neMultic Contact nezinye izinhlobo ze-MC4, futhi ilungele ikhebuli yelanga, 2.5mm, 4mm, 6mm kanye ne-10mm. Inzuzo ye-MC4 ukuxhuma okusheshayo nokuthembekile, ukumelana ne-UV ne-IP68 yokuvimbela amanzi, kungasebenza ngaphandle ama-25years.
I-10x38mm Solar Fuse Inline ebamba i-1000V MC4 Fuse Isixhumi
I-10x38mm Solar Fuse Inline holder engu-1000V MC4 Fuse Connectorwork ohlelweni lweSolar PV ukuvikela umthwalo omningi kakhulu kusuka kuphaneli yelanga naku-Inverter. I-10x38mm Solar Fuse Connector iyahambisana neMultic Imininingwane nezinye izinhlobo ze-MC4, futhi ilungele ikhebuli yelanga, 2.5mm, 4mm ne-6mm. Inzuzo i-inline fuse ingashintshwa, ukuxhumana okusheshayo nokunokwethenjelwa, ukumelana kwe-UV ne-IP67 engenamanzi, kungasebenza ngaphandle iminyaka engama-25.
Isixhumi se-Solar Inverter Isixhumi se-MC4 M12 PV Panel plug sisebenza esiteshini Solar ukuxhuma iphaneli yelanga ne-Inverter. Isixhumi se-MC4 sisebenzelana ne-Multic Contact kanye nezinye i-MC4, futhi ilungele ikhebuli yelanga, 2.5mm, 4mm no-6mm. Inzuzo ukuxhumana okusheshayo nokuthembekile, ukumelana ne-UV ne-IP67 manzi, kungasebenza ku-inverter, ebhokisini lokulawula nangaphandle kwama-25years.
I-MC4 Solar Diode Isixhumi Sokuxhumeka Kwephaneli Ye-Solar
I-MC4 Solar Diode Isixhumi Sokuxhumeka Kwepaneli Solar isetshenziswa ku-PV Prevent Reverse DIODE MODULE kanye nohlelo lweSolar PV ukuvikela ukubuyela emuva kwamanje kusuka kupaneli yelanga naku-Inverter. I-MC4 Diode Connector iyahambisana neMultic Contact nezinye izinhlobo ze-MC4, futhi ilungele ikhebuli yelanga, 2.5mm, 4mm ne-6mm. Inzuzo ukuxhumana okusheshayo nokuthembekile, ukumelana ne-UV ne-IP67 manzi, kungasebenzela ngaphandle ama-25years.
I-Mac4 Connector Dust Proust Cover Cover ye-cap
I-MC4 Connector Dust Proust Cover Sealing Cap isetshenziselwa i-MC4 isixhumi solar eyiduna nensikazi, ukuvikela othulini namanzi kuma-inator elanga nezinhlelo zonozungezilanga.